Ukusukela nge-19 ka-Okthobha ukuya nge-20, ngo-2019, igqirha lezonyango lwe-GMP kwi-Hebei liqhube isithuba seminyaka emihlanu se-GMP kwi-Depond, kwiPhondo le-Hebei ngokuthatha inxaxheba kweenkokheli zephondo, ezomasipala kunye nezesithili kunye neengcali.
Kwintlanganiso yokubulisa, uMnu Ye Chao, umphathi jikelele weqela laseHebei Depond, uvakalise umbulelo ongazenzisiyo kwaye wamkelekile kwiqela leengcali. Kwangelo xesha, wavakalisa ukuba "konke ukwamkelwa kwe-GMP lithuba lokuphucula inkqubo yethu yolawulo lomgangatho ngendlela ejikeleze yonke. Unethemba lokuba iqela leengcali liza kusinika uphononongo olukumgangatho ophezulu kunye neengcebiso ezixabisekileyo. Emva koko, emva kokumamela ingxelo yomsebenzi kaMnu Feng Baoqian, usekela-mongameli we-Hebei Depond, iqela leengcaphephe lenze uhlolo kunye nokwamkelwa kweziko lokuhlola imigangatho yenkampani yethu, indawo yokusebenzela, indawo yokugcina iimpahla, indawo yokugcina iimpahla. njl., kwaye kwenziwe ingcaciso egcweleyo kunye nokuphononongwa kolawulo lwezinto zethu zenkampani, ulawulo lwemveliso, ulawulo lomgangatho, ulawulo lokhuseleko, ubungcali babasebenzi, njlnjl. Kwaye bacebisana ngononophelo kumaxwebhu olawulo e-GMP nazo zonke iintlobo zeerekhodi noovimba.
Imigca yokuvelisa oku kubuya kubandakanya imigca yokuveliswa kwe-GMP ye-11 ye-powder yaseNtshona, iprex, umgubo wamayeza esiTshayina, isisombululo somlomo, isitya sokugqibela, ityhefu yokubulala intsholongwane, isibulala-ntsholongwane, itafile Ukubulala iintsholongwane inaliti enkulu, kwaye ngaxeshanye, imigca mibini emitsha yokuvelisa isisombululo se-transdermal kunye neendlebe ziye zongezwa.
Emva kokuvavanywa okungqongqo, okuneenkcukacha, okugcwele nokunzulu nokuhlolwa okunzulu, iqela leengcali linike isiqinisekiso esipheleleyo sokumiliselwa kwe-GMP yamayeza ezonyango enkampani yethu, kwaye sibeka phambili izimvo ezixabisekileyo kunye neziphakamiso ngokweemeko ezithile zenkampani yethu. Ekugqibeleni, kwavunyelwana ukuba inkampani yethu ifezekise imigangatho yokuqinisekiswa kwe-GMP yamayeza ezonyango, kwaye umsebenzi wokwamkelwa kwemigca ye-13 yokuphumelela kwaba yimpumelelo epheleleyo!
Ixesha lokuposa: ngoMeyi-27 ukuya ku-2020